Mourinho oo rumaysan in uu shaqada sii hayn doono - BBC Somali
Mourinho oo rumaysan in uu shaqada sii hayn doono
8 Disembar 2015
Jose Mourinho oo sheegay in mulkiilaha Chelsea uusan go’aan dagdag ah qaadanaynin.
Tababaraha Chelsea Jose Mourinho wuxuu u filayaa in mulkiilaha Chelsea Roman Abramovich uu taageeridoono inkasta oo xiligan ay ka jajabantahay.
Kooxda oo haysata horyaalka Ingiriiska hadda waxay ku jirtaa kaalinta 14 tobnaad waxaana laga badiyay sideed ka mid ah 15 ciyaarood oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska oo ay dheeleen.
Wali ma aysan xaqiijinin in ay u gudbaan kaalinta 16 ee koobka horyaalka Yurub ee Champions League loo yaqaano, waxaase laga reebay koobka League Cup-ka.
Waxaa la waydiiyay sababta aysan kooxdu u eryaynin, Mourinho wuxuu sheegay in uu kooxda u qabtay waxyaabo badan oo wanaagsan. Wuxuu sheegay in uusan filaynin in mulkiilaha in mulkiilaha ay badalikarto dabayshu.
Tababarahan Boortaqiiska ah wuxuu sheegay in mulkiilaha Chelsea, Abramovich uu rumaysanyahay isaga labo jeer oo kalaha tan koobaad in uu kooxda markale ku soo celiyay iyo tan labaad oo ah in uu xagaagii siiyay qandaraas cusub oo afar sano ah.